वास्तवमा कुरो के हो भने आलोपालो कुर्सीमा बस्ने सहमति भएको थियो । यो गोप्य प्रकारको सहमति थियो । त्यसैले फ्याट्टै खुला भयो । यदि गोप्यको साटो खुला सहमति भएको भए के हुन्थ्यो ? केही पनि हुँदैनथ्यो । किनभने खुलालाई फेरि के खुला गर्ने ?
'१'‘म म्मी–मम्मी ।’‘के सोमान बाबु ?’‘यता आउनोस् त ।’‘के भयो ?’‘भित्र कोही छ, मम्मी ।’ ‘कहाँ बाबु ?’‘किचेनमा मम्मी ।’‘को छ, किचेनमा ?’‘चोर हो, मम्मी ।’
कुनै समयका घाघडान कमरेड बाबुराम भट्टराई आफ्नो नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालसहित एक अर्को पार्टीमा घुलित भएका छन्  । होइन, आफ्नो पुरानो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा नभएर अपेक्षाकृत नयाँ पार्टी फोरममा  ।
विमल निभाका लेखहरु :
महासचिवको आठ आना
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव कमरेड विष्णु पौडेल प्रख्यातिको नाभिमण्डलमा कटेका छन्  । एक खारिएको कम्युनिस्ट नेता भएकोले यो चर्चाको बीजतत्त्व वर्गसंघर्ष, आन्दोलन र जनवाद त होइन ? होइन, होइन, यसको एकमात्र कारण आठ आना हो  ।
सात सालको क्रान्ति भइसकेको थिएन अझै
नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकारद्वय खगेन्द्र संग्रौला एवं नारायण ढकाललाई विशुद्ध ‘डाक्टरको बाबु’ भएकोमा मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई ! केही दिनअघि ‘मेडिकल लिटरेचर मेला, सौराहा, चितवनले दुवै साहित्यिक बन्धुलाई यही योग्यताको आधारमा ससम्मान आमन्त्रित गरेको थियो । अब योभन्दा उम्दा तथा मौलिक सम्मान साहित्यकारहरूका निम्ति अरु कुन हुनसक्छ ?
कुनै जमानाका बहुचर्चित महापञ्च कमल थापा आफ्नो एक अदत् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित बृहत जनआन्दोलनमा निस्किएका छन् । अचेल आन्दोलन यस्तै राजावादी, भूतपूर्व पञ्च र गणतन्त्र विरोधी (यहाँ म चलनचल्तीको मण्डले शब्दको प्रयोग गर्न गइरहेको छैन) मनुवाहरूका जिम्मामा आएको प्रतीत हुन्छ ।
अब जाम हुँदैन
म कडा जाममा परेको छु ।महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शनार्थ महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय सवारी हुने भएको छ । त्यसैले यहाँदेखि त्यहाँसम्मका पुरै सडक जाम गराइएको छ । यसका साथै सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड खड्गप्रसाद शर्मा ओली पनि यही मार्ग भएर सवारी हुने भएका छन् क्यारे ! एक प्रकारले दोहोरो जामको विकट स्थिति छ ।